ZITHATHELE Atlas CheetahC FS2004 - Rikoooo
Usayizi 29.8 MB
Play 2 924
Okwe FSX Version Chofoza lapha. I-Atlas Cheetah kuyinto indiza fighter we-South African Air Force. It is a kubuyekeze enkulu Dassault Mirage III. ezahlukeneyo ezintathu ezahlukene badalwa, lo ombaxambili-isihlalo Cheetah D, kanye single-isihlalo Cheetah E futhi Cheetah C. Cheetah ziye umhlalaphansi futhi lokho kwathathelwa indawo saab JAK-39 Gripens
Lokhu Iphakheji liqukethe isibonelo entsha ngokuphelele ezibukwayo kanye airfile iye lwenziwe kabusha ukwenza ngcono Dynamics indiza ye indiza. Kuhlanganisa model eyodwa kukhethwa isikhali multiple ukucupha, inkambiso imisindo, futhi lwamapulangwe izindiza Izikali ethize, futhi icindezeleka abanikeze asebenza nabo funda lula virtual. Liphinde sibonisa radar ukusebenza, ikhamera eyenziwe Izikali, a MFD entsha, nav zomculo ezintsha, donsa umshushuluzo kanye nemisindo. It sihlanganisa panel screen evamile futhi ububanzi. Sicela ufunde imibhalo (PDF)